3. टिम कसरी बनाउने ? - Investigative Journalism Manual
टिम बनाएर काम गर्ने हो भने थप कदम’bout योजना बनाउन जरूरी हुन्छ । पहिलो, परियोजना मेनेजर तोक्नु । परियोजना मेनेजरको काम धेरै महत्वपूर्ण छ ’cause टिमका सबै सदस्यले पर्याप्त र उचित योगदान गरुन् भन्ने कुरा यकिन गर्ने काम उसको हो । टिमका सबै सदस्यले गरेका काम भेला पार्नु पनि उसको काम हो । दोस्रो कदम भनेको कार्यशाला चलाउनु हो जहाँ टिमका सबै सदस्यले स्टोरीको विषयका ’boutमा चिन्तन गर्छन् र यो यो काम गर्नुपर्छ भनी सूची बनाउँछन् ।
यस बाहेक, टिमका सदस्यहरूको भूमिका स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूको स्वार्थ नबाझियोस् । टिमका सदस्य बोर्डका पनि सदस्य छन् भने बोर्डमा टिमका खोजसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने र निर्णय गर्ने बैठकमा उनीहरूले भाग लिनुहुँदैन । कुन निर्णय प्रोजेक्ट मेनेजरले गर्ने र कुन निर्णय संस्थाको नेतृत्वले गर्ने अनि यी दुईका बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुने भन्ने ’boutमा स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रोजेक्टर मेनेजर र संस्थाको नेतृत्वका बीचमा अनि प्रोजेक्ट मेनेजर र टिमका सदस्यबीचमा सम्झौता हुनुपर्छ ।
यी सांगठनिक कदमबाहेक, स्टोरी जुन विषयमा गर्न लागिएको छ त्यस विषयमा टिमका सदस्यहरू जानकार हुनुपर्छ । खोज गर्न लागिएको विषयसँग सम्बन्धित सबै कुरा टिमका सबै सदस्यले बुझेका छन् ? खोज गरिरहेको टिमका सदस्य पनि समाजका सदस्य हुन् । यस हैसियतमा उनीहरूले यस विषयमा कस्तो चासो दिनुपर्छ ? खोज पत्रकारिताका कस्ता कस्ता राम्रा चलन छन् भन्ने कुरा कार्यशालामा स्मरण गर्नुपर्छ । यसो गर्दा राम्रो परिणाम निस्कन्छ । आचारसंहिता’boutमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।
खोज गरिरहेका वेलामा, स्टोरीको विषयवस्तु सही छ कि छैन भन्ने कुरा अनि के के कुरा खोज्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने काम प्रोजेक्ट मेनेजरको हो । यति वेला स्टोरीको मान्यता परिमार्जन गर्न आवश्यक भए गर्नुपर्छ, (नयाँ) स्रोत परिमार्जन गर्नुपर्छ र आफूले गर्नुपर्ने कामको परिमार्जित र विस्तृत सूची सबै सदस्यलाई बाँड्नुपर्छ । स्टोरी कम्तीमा पनि यो स्तरको हुनुपर्छ भनी प्रोजेक्ट मेनेजरले लक्ष्य तोक्छ । स्टोरीले कम्तीमा पनि त्यस विषयमा आम मानिसको ज्ञान बढाउनुपर्छ । आफ्नो टिमले के कस्ता विज्ञको सहयोग लिन सक्छ र टिमका काममा कस्तो प्रगति हुँदैछ भन्ने ’boutमा मेनेजरले टिमका सदस्यलाई यसरी बताउनुपर्छ जसले टिममा उत्साह बढाओस् । यस्तो जानकारी पाऊँ भनी टिमका सदस्यले पनि मेनेजरलाई सोध्न सक्छन् । यसबाहेक, प्रोजेक्ट मेनेजरले टिमका सदस्यले दिएका योगदानलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ’boutमा पनि निर्णय गर्छ ।
२००२ मा ‘बोस्टन ग्लोब’ नामक पत्रिकाका पत्रकारले बोस्टन क्याथोलिक आर्चडाइसिसले पुरोहितले गरेका बाल यौन दुराचारका घटनाको ढाकछोप गरेको थाहा पायो । उनीहरूले यस विषयमा रिपोर्ट छापेपछि मात्रै अमेरिकाका अरू सञ्चारमाध्यमले आफ्ना क्षेत्रमा भएका यस्तै घटना’boutमा खोज गरे ।
यस खोजका ’boutमा फिल्म बनाइयो र २०१५ मा ‘स्पटलाइट’ का नाममा रिलिज गरियो ।
टिम बनाएर काम गर्ने हो भने थप कदम’bout योजना बनाउन जरूरी हुन्छ । पहिलो परियोजना मेनेजर तोक्नु । परियोजना मेनेजरको काम धेरै महत्वपूर्ण छ ’cause टिमका सबै सदस्यले पर्याप्त र उचित योगदान गरुन् भन्ने कुरा यकिन गर्ने काम उसको हो । टिमका सबै सदस्यले गरेका काम भेला पार्नु पनि उसको काम हो । दोस्रो कदम भनेको कार्यशाला चलाउनु हो जसमा टिमका सबै सदस्यले स्टोरीको विषयका ’boutमा चिन्तन गर्छन् र यो यो काम गर्नुपर्छ भनी सूची बनाउँछन् ।